ज्योती मगरले कलाकारिताबाटै काठमाडौंमा ठड्याइन् महल, खुल्यो यस्ता रहस्य ! (भिडियो) – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /Video/ज्योती मगरले कलाकारिताबाटै काठमाडौंमा ठड्याइन् महल, खुल्यो यस्ता रहस्य ! (भिडियो)
काठमाडौं। चर्चित गायिका ज्योती मगरले आफ्नै परिश्रमले काठमाडौँमा घर बनाएकी छन । सन् २००६ सालमा काठमाडौँ छिरेकी उनले २०१९ सालमा एउटा घर र अर्को ठाउँ घडेरी समेत जोडी सकेकी छिन । तर यति कमाई गर्न उनले धेरै दुख गरेको उनि बताउछिन ।****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******